GAAS: Reer Puntland Shan Sano Ayay Isiiyaan, Intaas Ayaa Ugu Filan oo Ideeqda [Daawo]
GAAS: Reer Puntland Shan Sano Ayay Isiiyeen, Intaas Ayaa-na Igu Filan [Daawo]
BRUSSELS- Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, oo ka hadlay kulan jaaliyada Reer Puntland ku nool dalka Belgium isugu yimaadeen ayaa waxaa si Dadban uu ugu hadlay arimaha doorashada iyo hadal haynta ah inuu muddada kororsanyo isagoo xusey in Shantii sano uu xilka hayey daaley islamrkaana uusan rabin markale, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Iyadoo xilli madaxeedka Cabdiwali Gaas ku egyahay dabayaaqadda sanadka 2019, ayaa waxaa jira shaki horey loo muujiyey kasoo ah in xaalada Puntland ku jirto loo adeegsado muddo kororsi.
"Reer Puntland Shan sano ayay isiiyaan, waana ay ku mahadsanyihiin, intaas ayaana igu filan oo ideeqda," ayuu Gaas ka sheegay xafad xog wareysi ah oo ay Jaaliyadda Puntland ugu qabatay Magaalada Brussels.
Mar uu ka hadlayey colaada Tukaraq Gaas ayaa waxaa Dadkii ka soo qayb galay kukankaas uu ka codsadey iney ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro Somaliland.
"Hadii dagaalka aadan daacad ka ahayn maba guuleysaneysid, marka aniga waxaan waxay iga tahay daacad, balse, idinka [Jaaliyadda] waxaa idin kaga baahan nahay waa ka qeyb qaadashadda difaaca dalka," ayuu xusay.
- Gooni isku taaga Somaliland -
Madaxweyne Gaas ayaa wuxuu ugu baaqay Shacabka Somaliland inay la midoobaan Umadda Soomaaliyeed, taasoo uu shaaca ka qaaday inay tahay waxa kaliya oo ay ku gaari karaan horumar.
Wuxuu uga digey dadka u olalaynaya inay Somaliland ka go'do Soomaalida inteeda kale inay iska ilaawaan, isagoo sheegay inay kala kulmi doonan cawaaqib xun, siduu hadalka u yiri.
"Somaliland, waxaa ka wayn HirShabelle iyo Galmudug, marka horumarka ay doonayaan waxay ku heli karaan iyagoo la midooba Shanta Soomaali, hadii kale waxay ka qaadi doonan kala qeyb-sanaan," ayuu raaciyay.
Gaas ayaa si dadban ku cabsi galiyey Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’isal wasaare Khayre isagoo yiri ma jiro nin madax ka ah Soomaaliya oo awoodi kari in Somaliland uu ka aqbalo gooni isu taaga ay dalbaneyso halka uu raaciyey dhinaca kale in Muuse Buuxi iyo Kaahin “Wasiirka arimaha gudaha Somaliland.” aysan u sheegi karin Isaaqa jooga Hargeysa iyo Burco iney dalkii Soomaaliya dib ula midoobayaan.
Waxaa inta khudbada ku guda jirey, cambaareyn xoogan u jeediyey wadahadalada horey u dhexmarey dowlada Federaalka iyo Somaliland halka kuwa la qorsheynayo uu ku sheegey iney sharci daro yihiin.
Madaxweyne Gaas oo si furan uga hadlayey qabiilka iyo colaada u dhaxeysa Puntland iyo Somaliland ayaa si dadban misaal ugu soo qaatey maamulka Muuse Biixi, Nin tuug ah oo guri u soo dhacey kasoo intii uu meel walba soo dhaafey, sariirtaada korkeeda intii uu kugu yimid ku yiri aan wadahadalno.
Dhinaca kale Gaas waxaa inta uu hadalkaan socdey si ba'an u weerarey Prof. Cali Khaliif Galeyr iyo Prof.Axmad Ismaaciil Samatar kuwasoo ku tilmaamey iney u adeegayaan Somaliland.
Prof.Samatar ayuu ku sheegey in 40 Riyood oo Gees Jaban keeney Tukaraq si uu xilka Wasiirka arimaha dibada uga helo Muuse Biixi isagoo cod dheer ugu sheegey dadkii isugu yimid goobta in xitaa agaasime waaxeed uusan ka heleyn Hargeysa.
Cali Khaliif Galeyr ayuu ku sheegey inuu qabo cudur la yiraahdo Stockholm syndrome oo ku dhaca waa sida uu hadalka u yiri dumarka kaliya gaar ahaan kuwa xadgdubka lagu sameeyo, isagoo sheegey iney dabeecadihiisu yahay iney jecladaan ciddii ku gabood fasha.
Garowe Online oo baaris ku sameeyey cudurkaan uu sheego Gaas ayaa ogaadey in uu yahay mid lagu fasirey xiriirka dhexmara qof ama dad afduub ama siyaalo kale loogu qabsado kuwasoo xoriyadooda markii laga qaado kadib xiriir ay la sameeyaan si naftooda u badbaadiyaan lagu arko hab-dhaqan ku dhuwaansho ah. Markii ugu horeysay Stockholm syndrome la maqlo waxay aheyd 1973 markii koox tuugo ah oo bangi dhaceysay iyo dadkii ay afduubeen oo ku sugnaa gudihiisa xiriir isu soo dhowaan-sho yeesheen, kuwasoo markii dambe ka diidey Booliiska iney ku markhaati furaan in ragaan ahaayeen tuugadii banagiga dhacdey.
Xiliga kale oo magacaan la isticmaaley ayaa waxay aheyd 1976 markii koox Falastiniyiin ah diyaarad Air France ah ku afduubeen Dad Israa'iiliyiin ah kalana dageen garoonka diyaardaha Entebbe dalka Uganda, xiligaas ayaa dadkii la haystey iyo afduubayaashii isu soo dhowaadeen kadib talaabooyin naxariis ah waxay u sameeyeen qaar ka tirsan dadkii ay soo afduubeen oo sii daayeen.
Gaas oo khudabdiisa dumarka kali misaal uga dhigey in cudurkaan ku dhaco ayaa baaris warsidahaan sameeyey ku ogaadey ineysan waxba ka jirin.
Goobta hadalka uu ka jeedinayey Mudane Gaas ayaa waxaa ku sugnaa dumar badan oo ay ku jirto marwadiisa Hodan. Halkaan ka akhri
Cabdiweli Gaas ayaa inta uu xilka Madaxweynaha ka hayey Puntland, waxaa lagu yaqaaney in goobaha dadweynahu isugu yimaado gaar ahaan qurbo joogta hadalo noocaan ah ka jeediyo, isagoo dadka goobta jooga dareenkooda is-xijiya balse go'aankiisu meel u yaalaa.
Hadal caan-baxay oo uu Madaxweyne Gaas ka jeediyey dalka Canada magaalada Toronto waqtigii lagu jirey doorashada Soomaaliya 2016-2017 ayaa waxaa uu noqdey misaalka ugu fiican ee la soo qaato marka laga hadlayo taariikhda go’aan qaadashadiisa.Madaxweyne Gaas oo uu la hadlayay xiligaas qurbo joog reer Puntland ee dagan Canada ayaa yiri; ogolaan mayno 4.5 hadii xitaa uu yimaado Baan-Ki-Moon "Xoghayihii hore ee QM midoobey.
Madaxweyne Gaas ayaa qodobkii uu diidayey xiligaas khudabadaas ku sheegey ee 4.5 ku saxiixey magaalada Garoowe sanadkii 2016 isaga iyo Ra'isal wasaare Cumar Cabdirashiid oo wakiil ka ahaa Madaxweyne Xasan Shiikh.
Hadaladaan Madaxweyne Gaas ka jeediyey Brussels ayaa dhinaca kale imaanaya xilli kulankii beesha caalamka ugu qabatey dalka Beljuim madaxda Soomaaliya baaqii kasoo baxay lagu sheegey in labada maamul Puntland iyo Somaliland joojiyaan colaada u dhexeysa islamarkaana khilaafka u dhexeeya lagu dhameeyo wadahadal.
Ugu dambeyn, Madaxweyne Gaas ayaa waxa uu cadeeyay in maamulkiisa uusan wax gor-gortan ka geli doonin dhulka ay Somaliland xooga ku haysto, islamarkaana ay ka goa'an tahay sidiiuu uga xorreyn lahaa maamulka Muuse Biixi.
Dagaalkii shaley ka dhacey degaanada ku dhow Tuulada Tukaraq ayaa...
Somaliland 11.02.2018. 01:18
Puntland: Tukaraq oo qarka u saaran in Dagaal ka qarxo markale
Puntland 24.05.2018. 02:43